Mareykanku oo Si Buuxda loo Talaalay ayaa loo sheegay in ay gudaha ku xirtaan Wajiyadaha Wejiga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Mareykanku oo Si Buuxda loo Talaalay ayaa loo sheegay in ay gudaha ku xirtaan Wajiyadaha Wejiga
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
CDC waxay weydiisaneysaa dadka Mareykanka ee si buuxda loo talaalay inay wejiga wajiga ku xirtaan gudaha
Tilmaamaha maaskarada waxaa loo adeegsan karaa oo keliya meelaha qaarkood ee leh dhacdooyinka sare ee Covid-19, ama dadka qaarkood.
Kiisaska cusub ee maalinlaha ah ee COVID-19 ayaa ku dhowaad laba jibbaarmay Mareykanka tan iyo bishii Juun.
Kala duwanaanshaha Delta ee la isugudbin karo ee coronavirus ee ku dhaca xitaa talaalka.
Go'aanka CDC wuxuu socday shaqooyin dhowr maalmood.
Laba bilood ka hor, ayaa Xarumaha Mareykanka ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) wuxuu sifeeyey tallaal buuxa oo Mareykan ah inuu ku laabto aagagga gudaha sida makhaayadaha, tiyaatarada, dukaamada iyo goobaha shaqada oo aan lahayn waji duub. Hadda, hay'adda ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay dib-u-dhigto oo ay kula talinayso dadka tallaalka buuxa si ay mar kale u xirtaan wejiga wajiga meelaha qaarkood ee gudaha.
Go'aanka, oo lagu gaadhay kororka kiisaska COVID-19, ayaa si weyn uga laaban doona hagitaankii hore ee ururka, markii lagu dhawaaqay.
Iyada oo kala duwanaanshaha Delta ee la isugudbin karo ee coronavirus uu faafiyo xitaa talaalka, iyo kiisaska koraya ee meelaha qiyaasta tallaalka hooseeyo, CDC-da ayaa lafilayaa inay waydiiso dadka la talaalay iyo kuwa aan la tallaalinba inay qariyaan markay cunayaan guriga ama ay galayaan meelaha kale ee dadku ku badan yihiin.
Tilmaanta CDC-da ayaa laga yaabaa in lagu dhawaaqo galinka dambe ee Talaadada, laakiin ereyada saxda ah wali ma cadda. Tilmaamaha maaskarada waxaa loo adeegsan karaa oo keliya meelaha qaarkood ee leh dhacdooyinka sare ee Covid-19, ama dadka qaarkood. Sida laga soo xigtay warbixinnada qaar, iyaga oo soo xiganaya ilo ka tirsan Aqalka Cad, in kuwa la nool carruurta aan la tallaalin ama dadka aan la tallaalin laga codsan doono in ay ku soo dhex daboolaan goobaha dadweynaha ee gudaha.
Go'aanka ayaa shaqeynayay dhowr maalmood. Lataliyaha caafimaadka ee Aqalka Cad Dr. Anthony Fauci ayaa axadii sheegay in hagida noocaas ah ay "si qoto dheer uga fiirsaneyso" CDC waqtigaas.
Kiisaska cusub ee maalinlaha ah ee COVID-19 ayaa ku dhowaad laba jibbaarmay Mareykanka tan iyo bishii Juun, sida laga soo xigtay xogta laga helay CDC. Inta badan kiisaska la soo sheegay ee ka mid ah kuwa aan la tallaalin, saraakiisha dowladda iyo dadka ka faalooda arrimaha warbaahinta ayaa eedda saaray kuwa diida in la tallaalo.
"Tani waa arrin inta badan ka mid ah kuwa aan la tallaalin, waana sababta aan halkaa u joogno, annaga oo ka codsaneyna dadka aan la tallaalin in ay baxaan oo ay is tallaalaan," Fauci ayaa yiri Axaddii, isaga oo intaa ku daray in Mareykanku uu hadda u guurayo jihada qaldan ”marka la eego tirtirida COVID-19.
Sida laga soo xigtay CDC, qaar ka mid ah boqolkiiba 69 dadka qaangaarka ah ee Mareykanka ayaa helay ugu yaraan hal qiyaas oo ah tallaalka coronavirus. Si kastaba ha noqotee, kuwa aan wali helin tallaalkooda, codbixinta cusub waxay muujineysaa in aqlabiyadda badankood aysan dooneynin inay sidaas sameeyaan.